.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ကွန်ပျူတာမှာ Alarm Clock လေးသုံးချင်ရင်
ကွန်ပျူတာမှာ Alarm Clock လေးသုံးချင်ရင်
ကွန်ပျူတာကို ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ သုံးတဲ့သူတွေ ၊ အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုလုပ်ဖို့ အချိန်စောင့်ရင်း သုံးနေတာမျိုးတွေဆိုရင်
မမေ့ရအောင်လို့ ဒီ Alarm Clock လေးနဲ့ Alarm ပေးထားလို့ ရပါတယ်။ ကိုယ်ထမယ့် အချိန်တွေမှတ်ပြီး စားလေးပါ
ရေးထားလို့ ရပါသေးတယ်။ Alarm မြည်လာရင် ဘာကိစ္စလဲဆိုတာ တန်းသိပြီပေါ့။ Alarm Sound လည်း ထည့်လို့
ရပါသေးတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို Myanmar IT Development က Dr.Ox က ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်အတွက် အသုံးလိုမယ် ထင်ရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ..။
Download: Alarm Clock ENG Version
မှတ်ချက်။ ။ ဒီ ဆော့ဝဲလ်လေးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်စက်ထဲမှာ Microsoft .NET Framework 2.0 နဲ့ အထက်ကို
Install လုပ်ထားရပါမယ်။ မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ကျွန်တော် v4.0.30319.1 ကို တင်ပေးထားပါတယ်နော်..။
Download: Microsoft .NET Framework v4.0.30319.1
Posted by Thurainlin at 08:30